AppGratis, application yezuva nezuva yekusimudzira, inomira kushanda. | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | IPhone maapplication
Pandakatenga yangu yekutanga iPhone, imwe yeanokumbira ayo akakurudzirwa kwandiri yainzi AppGratis. Simon, kumeso kunoonekwa kwebasa, ndiye aibata nhaurirano nevagadziri kuti vape chikumbiro chakabhadharwa pazuva isu tisingavabhadhare. Nhasi, mushure memakore manomwe, AppGratis ichagumisa rwendo izvo zvakatendera mamirioni makumi mashanu kuisirwa pasirese, ese emahara kana pamutengo wakadzikira kwazvo.
Matambudziko echikumbiro ichi neFrench Simon Dawlat akatanga muna 2013, apo Apple yakabvisa iyo app kubva kuApp Store nekuti, maererano neya Cupertino, kutyora mitemo yechitoro chayo chekushandisa ichiti kukwidziridzwa uye kushambadzira kwakabva kune wechitatu-bato kunyorera. Iyo sevhisi yakaramba ichishanda kune vashandisi vasina kusunungura iyo app, kune avo vaive vawedzera yavo email pawebhusaiti yebasa uye mune iyo Android vhezheni.
AppGratis inovhara mushure memakore manomwe ebasa
Zvinoenderana nezvatinogona kuverenga muchitaurwa rakabudiswa Pane iyo blog yewebhu webhusaiti yepamutemo, iro AppGratis timu inodaro yakasiya pane chaicho chekutanga, pavakaona kuti kutanga kunonetsa kuita uye kuti vanotora chikamu chikuru chehupenyu hwomunhu, zvese pasina vimbiso yekuti chichava kubudirira.
AppGratis akararama ndokufa. Chakanga chiri chigadzirwa chakanaka chine mukana wakasimba wekuve wekutanga munguva yezvinhu zvitsva. Vamwe vanhu vakazvifarira, vamwe havana, asi izvo hazvina basa futi. Nyika yakabatanidzwa uye nesuwo takadaro. Isu takave nekukwira nekudzika, isu taive nechido, taifara uye taive nerombo rakanaka kwazvo - kudzamara tarega kuita rombo rakanaka, asi hatina kurega.
Kunyangwe ndichifunga kuti kuvharwa kweAppGratis haisi nhau yakanaka, ndinotenda zvakare kuti haisi nhamo futi. MuApp Store mune zvakawanda zvekushandisa zvinokuzivisa nezve kukwidziridzwa, uye kwete rimwe chete pazuva. Chero zvazvingaitika, ndatenda uye nekuonekana, AppGratis.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » AppGratis, application yezuva nezuva yekusimudzira, inomira kushanda.
Hongu, zvinonyadzisa. Ini ndakaiisa sezvo yakabuda chaizvo uye ini ndawana mashoma maapplication nekuda kwayo.
Kune imwezve yandakawana kuti yakanaka kwazvo, AppZapp, yakanyatso kukwana uye yakagadzirisa zviyeuchidzo zvemaapps uye vanogadzira. Yakakwana kwazvo. Ndinozvikurudzira kwauri.
Imwe yakanaka ndeyeAppShopper, kana iwe ukanyoresa, mahara, unogona kushandisa iyo peji rewebhu zvakasiyana-siyana kuisa yako yaunoda app, iwo aunazvo, nezvimwe. Inokuzivisa iwe nezve izvo zvinodikanwa uye izvo zvaunazvo, kana paine shanduko mumutengo uye kana paine zvigadziriso. Mazuva ese vanoisa zvirongwa zvemahara, zviri kutengeswa kana zvitsva
Kutenda kune iyo app, ini ndawana runtastic bhasikoro pro, yemahara, ndatenda nezvese Simon
Inotevera Smart Keyboard inogona kuwedzera makiyi matsva: "emoji", "Siri" uye "share"